Exclusive : श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई भेटेको होइन– मोहनविक्रम – Everest Dainik
Exclusive : श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई भेटेको होइन– मोहनविक्रम
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र माओ धाराका प्रख्यात नेता मोहनबिक्रम सिंह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच आज बिहान प्रचण्ड निवासमा भेटवार्ता भएपछि वामपन्थी वृत्तमा त्यसले चर्चा पायो । सैद्धान्तिक दृष्टिले माओवादीका कट्टर आलोचकका रुपमा चिनिएका मोहनबिक्रम सिंह अर्थात् एमबी कमरेड र प्रचण्डबीचको भेट अकस्मात हुनुले यसका पछाडिको कारणबारे कतिपयले आफ्नै अर्थमा विश्लेषण पनि गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एकमात्र सांसद तथा पत्नी दुर्गा पौडेललाई सरकारमा लैजाने विषयमा कुराकानी भएको समेत कतिपयले अनुमान गरे । यद्यपी प्रचण्ड सचिवालयले भने वाम एकता र समसामयिक राजनीति नै भेटको मुख्य विषयबस्तु भएको बताएको थियो ।
अकस्मात किन गएका रहेछन् त मोहनबिक्रम सिंह प्रचण्डलाई भेट्न ? यसका पछाडि उनलाई समर्थन गर्ने दल राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाने कुरा त जोडिएका छैन ? यिनै विषयमा एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि गणेश तिवारीले गरेको कुराकानी :
एका बिहानै प्रचण्डलाई भेट्नु भयो, के कुरा भयो ?
हो हाम्रो भेटघाट र छलफल भएको हो । मूख्य गरी हामीले तीनवटा कुरामा गहन रुपमा छलफल र कुराकानी गरियौं । वामगठबन्धनले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ । नागरिक र वामपन्थी नेता कार्यकर्ता खुशी भएका छन् । चुनावमा सकारात्मक नजिता आएको छ । त्यसैले राष्ट्र, नागरिक, राजनीतिक स्थायित्वका र विकासका लागि अहिलेको एमाले मोवादीको एकता र वाम पन्थी गठबन्धनलाई कुनैपनि हालतमा टुट्न दिनु हुदैन । यसमा हाम्रो खास भूमिका रहदैन । माओवादीको मूख्य भूमिका रहन्छ । त्यसैले तपाई सचेत भएर लाग्नु र हाम्रो साथ छ भने ।
तपाईहरु पनि वाम एकतामा जानु हुन्छ ?
तत्काल हामी एकतामा जादैनौं । हामीबीच धेरै असहमति छन् । त्यसैले अहिले एकतामा जाने कुरा ह छैन । तर छलफल गर्न भने सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो जोड भनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने हो । मुलुकको तत्कालिन र दीघृकालिन समस्या समाधानका लागि वामपन्थीहरुबीचको एकता, गठबन्धन र सहकार्य आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै वामपन्थीहरु इमानदार हुनपर्छ र पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई र अहिलेको आवश्यकता हो ।
तपाईहरुबीच सैद्धान्तिक असहमति चाहीँ केहो ?
हामीबीच खासगरी, संगठन, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा हो । हाम्रो भनाई अहिल्यै समाजवादीमा जानसकिन्न भने हो वा त्यसको लागि आधार तयार भइसकेको छैन भने । र संविधान र यतिवेलाको भुराजनीतिक अवस्थामा समाजवाद उन्मुख हुने भने हो । उहाँहरुको अलिक परक छ । तर बसेर छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहीँ छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जान्छ ?
पार्टीको सरकारमा जाने नीति खुला छ । यसअघि पनि हामी सरकारमा सहभागी थियौं । तर सरकारमा जानेबारेमा पार्टीमा छलफल भएको छ । र निणर्य पनि भएको छैन ।
प्रचण्ड र तपाईबीचको आजको भेटलाई राजनीतिक बृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । सरकार गठनबारे के छलफल भयो ?
हामबिीच आजको भेटमा सरकार गठनका बारेमा कुनै कुरा भएन । खासगरी एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता र वामपन्थी गठबन्धनलाई कसरी अझै मजबुत र परिणाम मुखी बनाउने भनेबारेमा कुरा भयो । राष्टिसभा गठनका बारेमा मिलेर जादाँ अझैं राम्रो हुनेबारेमा छलफल भयो । जसरी हामी प्यूठान र बागलुङमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा मिलेर जादा राम्रो भयो त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि मिलेर जाने भने विषयमा हाम्रो छलपल केन्द्रित रह्यो ।
तपाई र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय छलफल भएको छ ?
चुनाव पछि भएको सम्पर्क र छलफल भएको छैन । थाइल्याण्डबाट फर्किएपछि होला ।
मोहनविक्रमले श्रीमतिलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका हुन भन्ने हल्ला छ नी ?
प्रचण्डजी सँगको छलफलमा सरकार गठन र पार्टीको सरकारमा सहभागीता बारेमा कुनै छलफल नै भएन । सरकारमा जानेबारेमा पार्टीले निर्णय पनि गरेको छैन । त्यसमा श्रीमतिलाई मन्त्री बनाउने कुरा त झन परको कुरा हो । हल्लाप्रीत मेरो कुनै टीप्पणी छैन । मन्त्री बनाउने बारेमा कुरा भएन ।
ट्याग्स: Bam Ekata, cm prachanda, Mohan Bikram Singh